Mareykanka oo RW Rooble garab istaagay una hanjabay Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
Mareykanka oo RW Rooble garab istaagay una hanjabay Farmaajo
War qoraal ah oo ka soo baxay xaafiiska u qaabilsan arrimaha Afrika, Xukuumadda Joe Biden, ayaa lagu sheegay in Mareykanku tallaabo ka qaadi doono kooxda caqabadaa ku ah nabadda Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya – Dowladda Mareykanka ayaa si adag ugu hanjabtay kooxda Farmaajo ee carqaladda ku ah nabadda iyo xasilloonida Soomaaliya, waxayna muujisay sida ay uga xuntahay isku daygii af-ganbi ee shalay Farmaajo ku doonayay inuu ku burburiyo hay’adaha dowladda.
Warkaan, oo ka soo baxay xafiiska u qaabilsan Arrimaha Afrika Wasaarada Arrimaha Dibadda Maraykanka, ayaa sidoo kale, si weyn loogu taageeray dadaallada uu Ra’iisul Wasaare Rooble, ku doonayo inuu ku saxo khaladaadka muuqda ee doorashada, oo boob ku billaabatay.
Mareykanku, wuxuu wax laga naxo lagana xumaado ku tilmaamay tallaabada sharci darrada ah ee Farmaajo isku dayay inuu ku hor istaago shaqada Ra’iisul Wasaaraha, halka uu darafyada is haya ugu baaqay in ay ka fogaadaan hadallada xiisadda sii siyaadin kara.
“Mareykanku wuxuu diyaar u yahay tallaabo ka qaadidda kuwa caqabadda ku ah Nabadda Soomaaliya, isku dayga awood [Shaqo] ka joojinta Rooble waa arrin dareenkeeda leh [Laga naxo], waxaana taageeraynnaa dadaalkiisa ku wajahan doorasho deg deg ah oo lagu kalsoonan karro, dhammaan dhinacyadu waa in ay ka waantooban ficillada iyo baaqyada kicinta ah” ayaa lagu yiri qoraalkaka soo baxay Dowladda Maraykanka.
Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali ah, kana tirsan Congress-ka, mareykanka, ayaa sidoo kale sheegtay in la joogo waqtigii uu meesha ka bixi lahaa Madaxweynihii hore Farmaajo, kaas oo waqtigiisii sharciga ahaa dhamaaday 10 bilood ka hor.
“Farmaajo sanad ayuu dhaafay muddo xileedkiisa, waxaa la joogaa waqtigii uu meesha ka bixi lahaa, si doorashada muddada la sugayey ay horey ugu socoto, sida ugu dhakhsaha badan,” ayey ku tiri, Ilhaan Cabdullaahi Cumar.
Dhanka kale, bayaan ka soo baxay Qaramada Midoobay, ayaa dhinacyada hardamaya loogu baaqay inay danta dalka ka hormariyaan wax walba, halka kooxda ku duushay xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha lagu wargaliyay in ay joogsadaan daandaansiga.
Waxa ay sheegeen in loo baahan yahay qabsoomidda shirka Golaha Wadatashiga Qaran ee RW Rooble, ku baaqay si degdeg ah iyo in ay sii socdaan wadtashiyada kale ee dhexmaraya saamilleyda siyaasadda ee muhimka ah.
Farmaajo, wuxuu si cad u diiday in la saxo khaladaadka ka jira doorashada oo ay ugu horreeyaan ku milanka siyaasadda ee xubno ka tirsan Guddiga Doorashooyinka, kuwaas oo Fahad iyo Farmaajo, qorsheynayeen in ay u boobaan kuraasta Golaha shacabka.
Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta, wuxuu damaca Farmaajo ku qeexay, ‘”Waa boobaa ama waa bannadaa”, wuxuuna bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay u istaagaan difaaca dowladnimada.